ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ချန်ပီယံလိဂ်၏ Marvel ပြိုင်ပွဲ
ချန်ပီယံလိဂ် APK ကို၏ Marvel ပြိုင်ပွဲ
အဆုံးစွန်နတ်မင်းကြီးထိပ်တိုက်တွေ့အတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးအံ့ဩခြင်းစူပါသူရဲကောင်းများ & စူပါဗီလိန်တွေနဲ့မော်ကွန်းနှိုင်းယှဉ်-တိုက်ပွဲများအရေးယူဘို့ပြင်ဆင်ပါ! Spider-Man, Iron Man, Wolverine & ပိုပြီးတိုက်ဖျက်ဖို့သင့်ရဲ့ဆင့်စောင့်ဆိုင်း! အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုစုဝေး & အဆိုပါ Ultimate Marvel ချန်ပီယံဖြစ်လာရန်သင့်ရဲ့ရှာပုံတော်စတင်!
Iron Man vs. Captain America! Wolverine vs. hulk! Deadpool vs. Spider-Man! အံ့ဩခြင်းသမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးတိုက်ပွဲသင်တို့လက်၌ရှိကြ၏! အဆိုပါကောက်ခံရေးအဖြစ်လူသိများသည့်ဠာ၏လောဘကြီးအသက်ကြီး Thanos, Kang ဟာအောင်နိုင်သူအပါအဝင်ညစ်လူကြမ်းအဖြစ်တစ်လိုင်း-up, ဆန့်ကျင်မော်ကွန်းအချိုးအစားတစ်ဦးရန်ပွဲရန်သင့်အားဆင့်ခေါ်နှင့်များစွာသောပိုပြီးခဲ့သည်! သင့်မိုဘိုင်း device ကို ... ချန်ပီယံလိဂ်၏အံ့ဩခြင်းပြိုင်ပွဲတွင်အပေါ်အဆုံးစွန်အခမဲ့-to-play စတိုက်ပွဲများဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစား!
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ suite UP:
•သင်၏မဟာမိတ်တွေနဲ့ Strategize သူတို့ကိုတိုက်ပွဲ၎င်းတို့၏ချန်ပီယံလိဂ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်
•တိုက်ပွဲမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲမှာထိပ်ပိုင်းရန်နှင့်သီးသန့်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဆုများရရှိရန်အထူးဒီဇိုင်းရှာပုံတော်မြေပုံထဲမှာအတူတူမဟာမိတ် Quest စီးရီးအပေါ်ယူ
၏ Champion သင့် Ultimate တွင် TEAM Building:
• (ကဲ့သို့သောချန်ပီယံလိဂ်ရွေးချယ်ရာတွင်: Iron Man, Hulk, Wolverine, မုန်တိုင်း, စတား-သခင်, Gamora, Spider-Man, Deadpool, magneto နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier) သူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်တစ်ဦးအားကြီးသောအဖွဲ့စည်းဝေး
• Quest များပေါ်တွင်စတင် Kang နှင့် Thanos အနိုင်ယူနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သစ်ကိုစူပါအစွမ်းထက်နတ်မင်းကြီးပြိုင်ဘက်များ၏စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရ, နောက်ဆုံးမှာဒီအံ့ဩခြင်းဠာ၏စုစုပေါင်းပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရန်
•မျိုးစုံ Mastery သစ်ပင်များနှင့်သင်၏အသင်းရဲ့ပြစ်မှုနှင့်ကာကွယ်ရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
THE အားအကွီးမား SUPER သူရဲကောင်းများစုစည်းရရှိ (AND villain!):
•အံ့ဩခြင်းရုပ်ပြ၏စာမကျြနှာကနေယူအဖွဲ့ကဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာအခြေခံ Synergy ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်, စုဆောင်းတက်မြင့်နှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်သင့်ရဲ့အသင်းများကိုစီမံခန့်ခွဲ
•ဆုကြေးငွေဘို့က Black Panther နှင့်မုန်တိုင်းသို့မဟုတ် Cyclops နှင့် Wolverine တက်ချိတ်တွဲ, ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆက်နွယ်မှုဆုကြေးငွေဘို့က Galaxy ၏ Guardians အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အောင်
•ပိုအစွမ်းထက်သည့်ချန်ပီယံ, ပိုကောင်း၎င်းတို့၏စာရင်းအင်း, စွမ်းရည်နှင့်အထူးရွေ့လျားဖြစ်လိမ့်မည်
•ဂန္အံ့ဩခြင်းဇာတ်လမ်းပြောပြဖက်ရှင်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် storyline မှတဆင့်ခရီး
•ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အံ့ဩခြင်းဠာ spanning အထင်ကရနေရာများတွင်သူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ်၏ကြီးမားသောခင်းကျင်းနှင့်အတူကထွက် Fight: Avengers မျှော်စင်, Oscorp က The Kyln, Wakanda, အဆိုပါဗေ့ခ်ျမြေ, Asgard, ဒိုင်းလွှား Helicarrier နှင့်ပိုပြီး!
•ပြောင်းလဲနေသောရှာပုံတော်မြေပုံ Explore နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်အထူးတီထွင်အရေးယူ-ထုပ်ပိုးတိုက်ပွဲများအသုံးချဖို့ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကျန်းမာထိုးထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ
www.facebook.com/MarvelContestofChampions: Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ
YouTube ပေါ်မှာ Subscribe to: www.youtube.com/MarvelChampions
Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: www.twitter.com/MarvelChampions
Instagram ကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: www.instagram.com/marvelchampions
သူတို့သင်နှင့် Kabam အကြားဆက်ဆံရေးအုပ်ချုပ်သောကြောင့်န်ဆောင်မှုအသုံးမပြုမီဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးသတိပေးချက်၏ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုပါ။
သူတို့ WARLOCK'S ဆိုက်ရောက်၏နက်နဲသောအရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အဖြစ်, cable & DEADPOOL အတူ SUNSPOT Join!
Mister ဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့အဆိုပါ Battlerealm ၏အားကြီးသော Mutant စမ်းသပ်ဖို့စိန်ခေါ်မှုနှင့် randomized Labs ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်!
လစဉ်သီးသန့်အကြောင်းအရာ, အခွင့်အရေးနှင့်ပိုပြီးလက်လှမ်းမီရရှိ! အဆိုပါ update ကိုဆင်နွှဲဖို့အခမဲ့ရက်သတ္တပတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခံစားပါ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်ပိုပြီး! playcontestofchampions.com/news: အ MCoC ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် updates များကိုအပြည့်အဝစာရင်းထုတ်စစ်ဆေး
97.63 ကို MB
Kabam ဂိမ်းများ, Inc